Koronaavaayiras: Dargaggeessi qorannoof osoo geeffamaa jiruu ambulaansii keessaa miliqee ture qabame – Kichuu
HomeHealthKoronaavaayiras: Dargaggeessi qorannoof osoo geeffamaa jiruu ambulaansii keessaa miliqee ture qabame
Koronaavaayiras: Dargaggeessi qorannoof osoo geeffamaa jiruu ambulaansii keessaa miliqee ture qabame
Itoophiyaatti dargaggeessi Sa’udii Arabiyaarraa deebi’e sodaa koronaavaayirasiif adda bafamee ture miliqee, Naannoo Amaaraa Godina Walloo Kibbaatti irra deebiin qabame.
(bbcafaanoromoo)–Itti-gaafatamaan Waajjira Fayyaa Aanaa Lagaamboo Obbo Geetinnat Ababaaw akka BBCtti himanitti, dargaggeessi irra deebiin qabame kun dhalataa Aanichaa akka taheefi ji’a tokkoon dura karaa seeraan alaatiin gara Sa’udii Arabiyaa akka deeme himan.
Akka Obbo Geetinnat jedhanitti dargaggeessi kun Sa’udii ji’a tokko erga turee booda, gara Itoophiyaatti xiyyaaraan deebifameera.
Wayita buufata xiyyaaraa Booleei gahutti wayita sakkatta’amu mallattoolee koronaavaayiras kan tahan ho’ina qaamaa fa’i kanneen biroo agarsiise.
Kanaanis anga’oonni kophaatti adda baasanii, qorannoo dabalataaf gara dhaabbata fayyaatti ambulaansiin geessaa turan.
Dargaggeessi kunis wayita ambulaansiin geessaa turanitti keessaa miliqe.
Eenyu eenyuun walqunnamee?
Dargaggeessi kun erga ambulaansicha keessaa miliqee booda obboleettiisaa magaalaa Finfinnee jirtu bira bule.
Erga achii ka’ee booda awutoobisii yaabbachuun dhufaa ture. Nutis kaleessa (Sambata) galgalaa eegallee konkolaataa eeguun sakkatta’aa turre jedhan Obbo Geetinnat.
Garuu yeroof achi buutee dargageessa kanaa arguu hin dandeenye jedhu.
Dargaggeessi maqaansaa hin dhawamne kun, erga Finfinneetii kahee booda magaalaa Kombolchaatti bu’ee konkolaataa biraa gara Dasseetti yaabbate.
Erga magaalaa Dasee bulee booda, gara magaalaa Gugguuftuu jedhamtutti yaabbate. Achirraayis Lagaamboo gale.
”Kanas kan gochaa ture akka hin qabamaneef jecha,” jedhaniiru Obbo Geetinnat.
Dhumarrattis obboleessi akka adda isa baasu gochuun awutoobisii uummataa keessaa sakatta’anii argachuusanii dubbatan.
Gorsa ofeeggannoo barbaachisu hunda hordofuun konkolaataa keessaa erga buusnee booda, gara Federaalaatti ergineerra,” jedhan itti-gaafatamaan kun
Yoom Sa’udiirraa deebi’e?
Obbo Geetinnnat namni kun Sa’udiirraa yoom akka deebi’e odeeffannoo akka hin qabne himuun, federaala irraa guyyaa kaleessaa bilbilamuu dubbatu.
Haata’u malee, namni kun karaa seeraan alaa ji’a tokko dura gara Sa’udii deemuun yeroo deebi’u garuu xiyyaaraan akka dhufe obboleessa isaarraa dhaga’eera jedhan.
Yeroo nama kana argan rakkoo akka hin qabne kan himan itti-gaafatamaan waajira fayyaa kun, atattamaan ambulaasii abbaa warraa obboleettii isaa yeroo sanatti waliin ture waliin gara federaalatti deebisuu himan.
Abbaan manaa obboleettii nama kanaa Finfinneetii isa waliin dhufe garuu waan ta’e hin beeku kan jedhan Obbo Getinnat, poolisiin federaalaafi raayyaan ittisaa dhimmanii duraanuu hordofaafi barbaadaa turuu ibsu.
Namni kun Finfinneetii gara naannoo Amaaraatti yeoo imaletti magaalawwan akka Kombolchaa, Daseefi Gugguuftuutti bubbu’aa akka dhufe himuun namoota inni qunname qulqulleeffachuuf yaalanis mirkaneeffachuu akka hin dandeenye dubbatu.
”Konkolaataa ummataa inni keessa ture keessa gara namoota 60 ta’anitu keessa turan garuu eenyuyyu hin beeku. Dunkaana dhaabnee namichi deemus odeeffannoo gurbaa kanaa hordofnee namoota adda baasuuf hojjechaa jirra,” jedhu.
Obbo Geetinnat naannoo isaaniittis hospitaala waan qabaniif namoota kana akka sirriitti hordofan ibsuun, konkolaataan namni sun keessa ture Dasee irraa ka’ee gara Saayintitti imalaa ture jedhu.
‘Gogaafi dhiigni Afrikaanotaa COVID19 ni dandamataa?’